हाम्रो प्राथमिकता ‘कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, सुखी र समृद्ध बागमती गाउँपालिका मुलाधार’ : अध्यक्ष लोप्चन
महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता
प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति
कृषि व्यवसायमा ५० हजार देखि २ लाख रुपैयाँ अनुदान
कृषि व्यवसायमा २ प्रतिशत व्याजमा ऋण
जटिल रोगको उपचार सहयोग
ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नं १ अन्तर्गतका साविकका सातवटा गा.वि.स.हरू घुसेल्, माल्टा, भट्टेडाँडा, प्युटार्, इकुडोल्, आश्राङ, गिम्दी मिलेर ७ वडा सहित बागमती गाउँपालिका बनेको छ।
१ सय ११.४९ कि.मि. स्क्वायर कुल क्षेत्रफल रहेको यस गाउँपालिकाको पूर्वमा महाङ्काल गाउँपालिका, पश्चिममा काठमाडौं जिल्ला, उत्तरमा गोदावरी नगरपालिका र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, दक्षिणमा मकवानपुर जिल्ला रहेका छन् ।
२०६८ को जनगणना अनुसार १३ हजार ४९ जनसंख्या रहेको यो गाउँपालिकको जनघनत्व १ सय १७.०४ व्यक्ति प्रति कि.मि. स्क्वायर रहेको छ । सबैभन्दा बढी ब्राम्हण (पहाडी) जाति, दोस्रोमा तामाङ र तेस्रोमा क्षेत्रीहरूको बसोबास रहेको छ भने यसका अलावा मगर, दमाई, कामी, घले, ब्रह्मु लगायत जातिहरू पनि छन् ।
गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवन
औषत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि र गाइवस्तु पालन व्यवसायले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको यस पालिकामा माल्टा फाँट, भट्टेडाँडाको राडर क्षेत्र, सिद्देस्वोर महादेव, महाङकालस्थान मन्दिर्, इकुडोलको माझखण्ड बुद्ध बिहार्, आश्राङको घ्याम्पे दह्, गिम्दीको चमेरो गुफा जस्ता पर्यटकिय सम्भावना बोकेका क्षेत्र छन् ।
सबै क्षेत्रमा सडक संजाल पुगेको यस गाउँपालिकले जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरूलाई आफ्नो पशु बिमा गर्दा गाउँपलिकाले ५०% बिमा रकम बेहोरिदिने, उन्नत जातका बिउबिजन्, पावर ट्रेलर्, डिजिटल काँटा, क्रेट सामग्री बितरण जस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रम सन्चालन गरिरहेको छ ।
बागमती गाउँपालिकालाई पर्यटकिय गन्तव्यस्थलको रुपमा विकास गर्न पर्यटकीय गुरुयोजना सन्चालन गरिसकेको छ । महिला जनजाति, दलित तथा उत्पीडित वर्गहरूको शसक्तिकरण एवम् उत्थानका लागि आवश्यक चेतनामुलक्, सीपमुलक आयआर्जनमुलक तालिमहरूको व्यवस्था गरिरहेको पालिकाको भनाइ छ ।
छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सक्रिय यस गाउँपालिकाको नेतृत्व अध्यक्ष बिर बहादुर लोप्चनले गरिरहेकाछन् ।
‘कृषि र पर्यटन र पूर्वाधार र सुखी र समृद्धि बागमती गाउँपालिका मुलाधार’ नारा सहित बागमतीको विकासको नेतृत्व गरिरहेका लोप्चनसँग जयदेशकर्मी सुन कुमारी थिङ्गले पालिकाले गर्दै आएका गतिविधि र प्रगतिका सन्दर्भका रहेर कुराकानी गरेकी छिन् ।
यहाँले जिम्मेवारी सम्हालेको चार वर्ष पुरा भएको छ । गाउँपालिकाले बनाएका योजनाहरू र यहाँका प्रतिवद्धता कति पुरा भए ?
हामीले हरेक काम योजना बनाएर गर्दै आएका छौं । योजना गरिएका काम समयमै सम्पन्न गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमितामा पर्छ । हाम्रो पालिको हकमा लगभग ८० प्रतिशत योजना गरिएका काम सम्पन्न भएकाछन् । बाँकी काम पनि हाम्रो कार्यकालमै हामीले पुरा गछौं ।
सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका के के कामहरू भएकाछन् ?
हामीले सुरुको वर्ष देखि नै एकल पुरुषलाई भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएका हौं । अहिले धेरै तिर यसका विषयमा सुन्नमा आएपनि संभवत यो नेपालमा पहिलो हो। ६० वर्ष माथिका र ७० वर्ष भन्दा कमका एकल पुरुषलाई हामीले मासिक १ हजार भत्ता दिँदै आएका छौं । ७० वर्ष पछि उहाँहरू स्वतः सरकारले दिने वृद्धाभत्ताको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्नुहुन्छ । यसलाई अहिले बढाएरर १५ सय पुराएका छौं । पालिकामा यो संख्या ५० जना भन्दा बढीको संख्यामा छ।
त्यसको साथै नेपाल सरकारले अगाडि सारेका र नियमित रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएका विभिन्न खालका भत्ता छन्, त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।
वृद्धाभत्ता वितरण गर्दै
पालिकाका युवा लक्षित कार्यक्रम के के छन ?
हामीसँग युवा लक्षित कार्यक्रम पनि छन् । विशेष गरि विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा, पशुपालनमा संलग्न भएको अवस्थामा २ प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम गत वर्ष देखि ल्याएका छौं । त्यस्तै यस्ता व्यवसायमा संलग्नलाई फर्मको प्रकृतिको आधारमा ५० हजार देखि २ लाखसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं ।
हाम्रो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्र प्रभावकारी देखिएकोले कृषकलाई कृषि सामाग्री, औजार, ट्याक्टर, टनेल सामाग्री, बिउविजन लगाएतका मागमा आधारित रहेर सहयोग गर्दै आएका छौं ।
यो योजना मात्र हो कि कार्यान्वयनमा पनि गएको छ ?
यसको लागि हामीले व्याज अनुदानका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजनका थियौं । व्यवसायिक रुपमा भैंसीपालन गर्ने, बाख्रापलन गर्ने, तरकारी खेती गर्ने लगायतलाई उनीहरूको व्यवसायिक योजना र व्यवसाय संचालन गर्दा कुनै वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएको भए त्यसको जानकारी गराउन भनेका थियौं तर त्यो माग आएन ।
अन्य ५० हजार देखि २ लाखसम्मको अनुदानका लागि विभिन्न व्यवसायिक कृषकलाई हामीले अनुदान उपलब्ध गराएका छौं ।
कार्यक्रमको योजना बनाउदा नागरिकको सहभागी कस्तो छ?
हामीले गाउँ गाउँबाट योजना संकलन गर्छौं, त्यो वडामा आउँछ र वडाबाट पालिकामा आउँछ , पालिकामा पनि आर्थिक, पुर्वाधार, वातावरण, विपत व्यवस्थापन लगायतका समितिछन् । यसका छलफल गरेर बजेट विनियोजन गरेर परिषद्मा पेश गरिँदै आएको छ ।
यसरी छलफल गर्दा कस्ता कस्ता योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्दै आएकाछन् ?
हामीले ‘कृषि र पर्यटन र पूर्वाधार र सुखी र समृद्धि बग्मती गाउँपालिका मुलाधार’ भन्ने नारा तय गरेका छौं । त्यसकै आधारमा हामीले यसपाली कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छौं ।
पर्यटनको लागि कुन ठाउँमा सम्भावना क्षेत्र छन ?
हामीले तिनपानी भञ्ज्याङको सातकन्या राडर क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दैछौं । त्यस क्षेत्रमा पिकनिक स्पट पनि बनिरहेको छ । हामीले हरेका वर्ष त्यसमा लगानी गर्दै आएका छौं ।
यसपटक पर्यटन विभागबाट पनि बजेट परेको छ । हाम्रो समपुरक बजेट पनि त्यहाँ छ । त्यसलाई हामीले पर्यटक आउने गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न हामी लागिरहेका छौं ।
स्वस्थको र शिक्षाको क्षेत्र के के गर्नुभएको छ ? के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रा ७ वटै वडामा स्वास्थ्यचौकीहरू छ । एउटा स्वस्थ्य इकाइ पनि छ । हामीले कोभिड–१९ नियन्त्रण व्यवस्थापनको लागि एउटा अस्थायी अस्पताल समेत चलाइरहेका छौं । औषधि उपलब्ध गराउँदै आएका छों । साथै कसैले संक्रमित भएर ज्यान गुमाएको प्रमाण लिएर आएको अवस्थामा हामीले हाम्रा नागरिकलाई १० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेका छौं ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि हामीले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।
प्राविधिक शिक्षा पढ्नेहरूको लागि पालिकाले बजेट व्यवस्था गरेको छ ?
३ वर्ष भयो हामीले जनजाति छात्रवृत्ति भनेर कार्यक्रम राखेका छौं । यसलाई अहिले सबै नागरिकलाई समेट्ने गरि जेहेन्दार तथा जनजाती छात्रवृत्ति नाम राखेका छौं । यसबाट कृषि, पुश, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएका प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई वार्षिक ५० हजार रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका छौं ।
कृषिजन्य सामाग्रीको बजारिकरण समस्या भएको गुनासो आएको सुनिन्छ नि ?
हामीले ४ वटा वडामा तरकारी संकलन केन्द्र बनाएका छौं। सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि तिनपाने भञ्ज्याङ क्षेत्रमा संकलन तथा चिस्यान केन्द्र बनाउने योजना गरेका छौं । यसको लागि सरकारी जग्गामा निर्माण गर्न नमिल्ने भएपछि केही संरचना निर्माणको लागि समन्वय गरिरहेका छौं ।
संकलन केन्द्र संचालनमा अएपछि बजारीकरणमा सहज हुन्छ ।
तीन तहको सरकार छ समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?
समन्वय भइरहेको छ । केही सजिला असजिला भन्ने हुन्छन् नै । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एउटै फेवरको हुँदा सजिलो हुने, योजना पार्न देखियो कार्यान्वयनसम्म सहज हुने हाम्रो अनुभवले देखाएको छ ।
गाउँपालिका अगाडि बढ्नको लागि के कस्ता सम्भावनाका क्षेत्रहरू देख्नुभएको छ ?
सम्भावनाका क्षेत्र धेरै छन । उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने, ढुङ्गा , गिट्टी, बालुवा चुनढुंगा खानीहरू प्रशस्त छन् । खानीखोला हाइड्रो पावर हाम्रै पालिकामा पर्छ। मान्डु हाइड्रो पावर यसै क्षेत्रमा छ । यस्ता धेरै खालका संभावना यस क्षेत्रमाछन् ।
यस क्षेत्रमा अवैध रुपमा बालुवा ओसारपसार गरेको भन्ने सुनिन्छ नि ?
बालुवा निकासी हुने क्षेत्र त हो तर हामीले अवैध भन्दा पनि टेन्डर प्रकृयाबाट नै निकासी भइरहेको छ । हाम्रोमा त्यस्तो छैन ।
सामाजिक सुरक्षाका बाहेक नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिएका अन्य काम के के छन् ?
हामीले महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई मासिक १ हजार भत्ता दिँदै आएका थियौं । अहिले यो बढाएर १५ सय पुराएका छौं । महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका जो नागरिकको घरघरमा पुग्छन् । मतृशिशु स्वास्थ्य सुधार, बालमृत्युदर कम गर्ने जस्ता दीर्घकालिन लक्ष्य पुरा गर्ने अभियानमा लागेकालाई राज्यले हेर्न नसकेको अवस्थामा हामीले थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था पनि गरेका छौं ।
क्यान्सर, मुटु, मृगौला लगायतका जटिल खालका बिरामीलाई पालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। अन्य बिरामी नागरिक जसलाई आर्थिक सहयोगको खाँचो छ, बिलको आधारमा सामान्य खालका सहयोग गर्दै आएका छौं ।
सबै वडालाई समान व्यवहार भएको सुनिश्चितता कसरी गर्नुहुन्छ ?
म सबै वडाको सबै पार्टी अध्यक्ष हो । सबै वडा विकासको लागि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । यसको सानो उदाहरण गत वर्ष एउटा संस्थाले ३ वटा वडामा राहत दिन भनेर आयो तर मैले सबै वडालाई दिने भए मात्र कार्यक्रम स्वीकृत गरे पश्चात सबै वडामा राहत वितरणको कार्यक्रम गएको थियो ।
कुनै पनि वडालाइ उपेक्षा गरेको छैन । सबै वडालाइ समान रूपमा काम गरेको छु ।
पालिका भित्र कुन कुन महत्वपूर्ण पूर्वाधारका काम भए ?
हामीले आफ्नै पहलमा ७ रोपनी जग्गा किनेर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौं । पालिका क्षेत्र भित्र हामीले अस्पताल पनि निर्माण गरेका छौं । सबै वडाका गाउँ गाउँमा सडक संजाल जोडिएको छ । वडाका भवन, धेरै स्थानमा खानेपानीका योजना सम्पन्न भएकाछन्।
सडक निर्माण अनुगमन
चुनौतीको पर्खाल नाघेर महामन्त्री बनेका कन्चन
बागमतीमा देउवा समूहका बानियाँले दोस्रो चरणमा बहुमत पुराए, केसी १५८ मतले पराजित
अध्यक्ष सिङ्तानलाई मातृशोक
बागमती कांग्रेस : पहिलो चरणमा बहुमत पुगेन, पहिलो बनेका बानिँयालाई तेस्रो बनेका प्रधानले सघाउने !
कांग्रेस बागमती प्रदेशको मतदान सुरु
आपसको निम्ती समाज संस्थाद्वारा मेडिकल कक्ष व्यवस्थापनमा सहयोग
सडक बनाउन माग गर्दै आन्दोलित भएका युवा पक्राउ